ပညာရေးဌာနမှ ဆရာမ အမျိုးမျိုး — Steemit
ပညာရေးဌာနမှ ဆရာမ အမျိုးမျိုး
thaelay (38)in #steemit •4years ago
၁။ Brand ဆရာမ
ရန်ကုန်မြို့လယ်ကျောင်း(ထိတ်ထိတ်ကြဲ)ကဆရာမတစ်ချို့က ပိုက်ဆံရှိရှိမရှိရှိ(တစ်ခုခုရှိလို့ပဲ အဲကျောင်းမျိုးရတာပေါ့)brand ပဲသုံးကြတယ် ဘာလို့လဲဆို ကျောင်းက ကျောင်းသူ/သားတွေရဲ့ လက်ဆောင်တွေက ဆရာမရဲ့ အသုံးဆောင် brandပေါ်မူတည်ပြီး တန်ဖိုးကွဲသွားလို့ဆိုပဲ၊အဲဆရာမမျိုးက brandဆရာမမျိုး ။
မျက်စိကြီး နားကြီး အလုပ်အကိုင်ကြီး တဲ့ဆရာမမျိုး၊မြို့နဲ့ နီးနီးနားနားရွှာတွေက တော်တဲ့(အောင်ဖို့သေချာသော)ကျောင်းသား/သူတွေက ကိုးတန်းထိ ရွှာမှာ ဖျစ်ညှစ်တက် ဆယ်တန်းရောက်တော့ မြို့ပြောင်း သူ့ဘာသာ အောင်ချက်တက် ပြီးတော့ ပြုံးပြုံးလေး ဆုတက်ယူတဲ့ဆရာမမျိုး။
၃။ကျောက်ခဲ အရည်ညှစ် ဆရာမ
မြို့နားနီးတဲ့ ရွှာတွေက ဆရာမတွေ။ ကိုယ့်ကျောင်းသားတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်လာလိုက်ရတာ နောက်ဆုံး ၁၀တန်းလည်းရောက်ရော အောင်ဖို့သေချာသူတွေက မြို့ကိုပြောင်းသွားတော့ ကျန်ခဲ့တဲ့ ငါးရှာ၊ဖားရှာ အခြေခံအားနည်းတဲ့(ကျောင်းမတက်တစ်ရက် တက်တစ်ရက်) ကျောင်းသားမျိုးကို အောင်ချက်% သုညမရောက်ဘို့ အရည်ညှစ်သင်နေရတဲ့ ဆရာမျိုး ။
၄။ ကျောင်းသားရှာဖွေရေး ဆရာမ
တောရွှာဇနပုဒ်တွေမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့ ဆရာမတွေပေါ့။ ပထမကျောင်းတက်ရက် ကျောင်းသား ၁၀ယောက် နောက်နေ့ဆို ၉ယောက် ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့တစ်ယောက်နုန်းပျောက်သွားတာ နောက်ဆုံး စာသင်ရမယ့်ကျောင်းသားမရှိလို့ ကျောင်းသားထွက်ရှာရတဲ့ ဆရာမမျိုး(ကလေးတွေက မိဘကိုကူနေရတာ)
၅။ ကိုယ့်ဝမ်းကို မသဒ္ဓါတဲ့ဆရာမမျိုး
လစာက အားပါစရာကောင်းလှပါတယ်ဆိုမှ ကိုယ့်ကျောင်းသားတွေက အဖေမစုံ အမေမစုံ အဖေမေမရှိ အိမ်မှာထမင်းမစားခဲ့ရတဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတပည့်တွေကို ကိုယ့်ထမင်းချိုင့်ထဲက ထမင်းကိုခွဲကျွေး၊ရတဲ့ လစာထဲက စာအုပ် ခဲတံ ၀ယ်ပြီးပေးပေးနေရတဲ့ ဆရာမမျိုး။
(နောက်ထပ် အမျိုးစားများကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါအုန်းမည်)
ပညာရေးဌာနမှ ဆရာမ အမျိုးမျိုး-၂
၆။ နိုင်ငံရေး ကျောင်းဆရာမ
အများအားဖြင့် အသက် ၃၀အောက်ဆရာမတွေ ဆိုးဝါးတဲ့ ပညာရေးစနစ်ကို ရွံရှာ စက်ဆုပ်ပြီး စနစ်သစ်ကို ကူးပြောင်းလိုစိတ်ပြင်းထန်နေတဲ့ ဆရာမမျိုး(အလုပ်ပြုတ်ပြုတ် မပြုတ်ပြုတ် လမ်းပေါ်ထွက်ရဲသူများ)
စနစ်ဆိုးလက်အောက်မှာ စနစ်ကိုအပြစ်တင်ပြီး စာမသင်၊ကျောင်းသားမျက်နှာမငဲ့ အချောင်ခို ကျောင်းအုပ်ကို ဖားယားပြီး လစာထိုင်စားနေသောဆရာမမျိုး။
၈။ သင်နည်းမှတ်စု ဆရာမမျိုး
ဒီဆရာမမျိုးက နည်းနည်းဆန်းတယ် ကျောင်းသားကိုစာသိပ်မသင်ဘူး၊အတန်းချိန်လည်းသိပ်မ၀င်ဘူး အဲ ဒါပေမယ့် ကျောင်းစစ်ဆေးရေးတွေလာရင် ဘာစစ်စစ် အဆင်ပြေအောင် သင်နည်းမှတ်စုတို့ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းတို့ကို အပြည့်ထိုင်ရေးနေတတ်တဲ့ ဆရာမမျိုး။
၉။ Eco ဆရာမ
ကျောင်းကိုရောက်ရင် စာသင်တာ မသင်တာ အရေးမကြီးဘူး ၀င်ငွေဘယ်ကရမလဲ? အခုချိန် ဘာအရောင်းဝယ်လုပ်ရင် တွက်ချေကိုက်မလဲ?? စဉ်းစားနေတတ်တယ် ပိုက်ဆံသာမျိုးမျိုးမြတ်မြတ်ရမယ်ဆို လစာမဲ့ ခွင့်ယူဖို့ ၀န်မလေးတဲ့ ဆရာမမျိုး ။
၁၀။ ၀တ်ကျေ တန်းကျေ ဆရာမ
ဒီဆရာမ အမျိုးစားကတော့ မြန်မာပြည်မှာ အများဆုံးလို့ထင်ပါတယ် ကိုယ်တာဝန်ယူရဲ့အပိုင်းကဏ္ဍကို တတ်နိုင်သလောက် ကျေကျေပွန်ပွန်ထမ်းဆောင်မယ်၊နေ့စဉ်ဘ၀ကို ပုံမှန်အတိုင်းဖြတ်သန်းတတ်တဲ့ ဆရာမမျိုး ။
ဆေးလိပ်ခိုးသောက် ကွမ်းခိုးစားနေတဲ့ ကျောင်းသားဆိုးတွေ၊စာသင်မရအောင် ဆိုးသွမ်းတဲ့ တပည့်တွေ လိမ္မာပါစေ၊စာလေးရပါစေဆိုတဲ့ အမေစိတ်မျိုးနဲ့ ဟစ်တလာမျက်နှာဘေးလို ခပ်ကြမ်းကြမ်းသရုပ်ဆောင်တတ်တဲ့ ဆရာမမျိုး ။
**နောက်ထပ် အပိုင်းအား ဆက်ရေးသင့်/မသင့်??? ;-)
ပညာရေး ဌာနမှ ဆရာမအမျိုးမျိုး -(၃)
ကျောင်းတော်တော်များများက ဆရာမတွေဟာ ဂိတ်ဂျူတီ၊အိမ်သာစောင့်၊အစစ အရာရာ တာဝန်များထမ်းဆောင်နေရဆဲ...ထိုထိုကဲ့သို့ ဆရာမမျိုး ။
တစ်ချို့ဆရာမတွေ အသက်အန္တရာယ်နဲ့ နီးတဲ့နေရာမှာနေပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတယ် ဒါပေမယ့် သူတို့အပေါ်တန်ပြန်သက်ရောက်မှုကြတော့ မြန်မာ့တပ်မတော်သားတွေကို မြင်ကြသလို မြင်ခံရတဲ့ ဆရာမမျိုး ။
တောမကျ မြို့မကျနေရာတွေက ဆရာမများ။ ပညာရေးသဘောတရား၊ပညာရေးစိတ်ပညာ၊ပညာရေးသင်ကြား နည်းဆိုတာ ဘာမှမသိတဲ့ ကျောင်းသားမိဘ(တစ်ခါတစ်လေ ကျောင်းသားတွေကပါ ပြောချင်သေး)ရဲ့ စာတတ် ပေတတ် လေသံကို နားထောင်ပြီး မချိပြုံး ပြုံးနေရတဲ့ဆရာမမျိုး ။
၁၅။ အနာများတဲ့ ဆရာမ
ကျောင်းဆရာမ မဖြစ်ချင်ဘဲ အခြေနေအရဖြစ်လာပြီး နာ လေး ငါးနာမက နာရတာကိုပဲ ဘ၀လို့ထင်နေပြီး ကျောင်းဆရာမဘ၀ကို တွယ်တာနေတဲ့ ဆရာမမျိုး။
#education #myanmar #story #esteem
4 years ago in #steemit by thaelay (38)
Congratulations @thaelay! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :
Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by thaelay from the Minnow Support Project. It'sawitness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It'sacompletely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.